Badii Adii | Horn Affairs Afaan Oromo
Adda Bilisummaa Oromoo (ABO),
Oromummaan sabboonummaa dhiphummaan yookiin sabboonummaa of-tuulummaan dhufurratti osoo hin ta’in sabboonummaa maalummaa Oromoorratti hundaa’uun tahuu qaba. Maalummaan Ummata Oromoo Aadaa Ummata Oromoo ti. Eenyummaa Ummata Oromoo ti.
Haata’u malee, sabbboonummaan Oromummaa keenya maalummaa fi eenyummaa keenya qofarratti hundaa’uun akka hin ilaalle cunqursaan Gita Bittaa Nafxanyaa maalummaa fi eenyummaa keenyarratti waggaa dhibbaa ol geggeessite gahee guddaa qabata. Sirni Gita Bittaa Nafxanyaa kun madda rakkoo keenya hundaa ti. afaan jennuus, Aadaa jennuus, Diinagdee jennuus, Barumsa jennuus, Hawaasummaa jennuus, siyaasaa jennuus ta’ee rakkoolee akka ummata Oromootti nu qunnamnuuf maddi sababa isaa Sirna Gita Bittaa Nafxanyaa ture sani.
Otoo waggaa dhibban dabran cunqursaan sirna Gita Bittaa Nafxanyaa ku jiraachuu baatee har’a eessa akka jirru yaaduun qofti gahaa dha. Sirni Gita Bittaa kun kan cunqurse maalummaa fi eenyummaa keeenya qofa osoo hin ta’in ilaalcha sabaa fi sablammootni biraa nu itti ilaaluu fi ilaalcha nutiis sabaa fi sablammoota biraa itti ilaallu irratti dhiibbaa guddaa fidee ture. Kana yeroo jennu, jechi Oromoo jedhamu yommuu dhagahamu akka sodaaa (fear) fi suuraan hamtuun sammuu ummatoota biroo keessatti akka uumamu, ilaalchi nuti ummatoota biraafiis qabnu akka dhiphatuu fi akka ummatoota biraa shakkinu akkasumaas akka keessa keenyattillee amantaaa fi gandummaan waliif hin galle godhee kan ture adeemsa Sirni Gita Bittaa Nafxanyaaa kun nu itti cunqurse kan fide tahuu isaa hubachuun barbaachisaa dha.
Gama biraatiinn immoo akka nuti waa hundaan huddu duubatti hafnu, akka ilmaan Oromoo hin baranne, barataniis akka oromummaa isaanii dhoksan, akka Oromummaa isaaniitti itti qaanfatan, akka ummata isaaniif hojjachuu osoo hin taane akka qondaaltota nafxanyaatiif hojjatan dirqamuu ture. Afaan keenyaas akka hin dubbatamne, afaan keenya akka hin qancaraa’u, afaan keenya akka hin babal’anne, maalummaan keenya akka hin mul’anne, akka ummatni biros ummata oromoo hin beekne waan hamtuu itti fakkeessuudhaan fi tooftaa adda addaatiin miidhaa guddaa nurratti adeemsifamaa ture. Nu qofaa miti. Sabaa fi sablammoota biraarrattiis akkasuma cunqursaa gagggeessaa turan.
Gama diinagdeeniis, ummatni Oromoo akka abbaa qabeenyaa hin taane, akka dafqee nafxanyaa isa cunqursitu gabbisu, akka oomishee isaan nyaachisu, akka ilmaan isaa barsiifachuu manna of jala bobbaasee nafxanyaaf tajaajilsiisu, akka hiyyummaan ukkaamamu kan godhe surna Gita Bittaa Nafxanyaa bara dhibbaa ol dafqa Ummata Oromootiin Oromoo cunqursaa ture kana. Kanaa ol akka gabraatti meeshaa fi kennaadhaan ummatni keenya kan jijjiiramaa turees sirnuma nafxanyaa kana keessatti.
Ummatni Oromoo waggaa dhibbaan dura ofiin of bulchaa, akka ofiitti jiraachaa ture. San duraas sirna gadaa dimokraasii addunyaaf dura dhiheesseen ofiin of bulchaa ture. Ummatni Oromoo sirna gadaa keessatti sabaa fi sablammoo biro wajjiiniis tahee ummata biro kamiin wajjiinuu jaalalaa fi badhaadhaan jiraachuu ture. Oromummaan jaalala waan taheef oromummaan dhiphummaa osoo hin ta’in badhaadhummaa fi hunduu fedhinnaan haammachuu ture. Of keessattiis hawaasa guddinaa fi haqa eegu ture.
Sirna maalummaa fi eenyummaa badhaadhaa keenya ukkaamsee ture sirna Gita Bittaa Nafxanyaa kana ofirraa darbuuf Ummatni Oromoo falmii fi qabsoo adda addaa godhaa ture. Gonkumaa sirna gita bittaa kana fedhinnaan fudhatee hin beeku. Sirna kanaa diddaa ta’uuf wareegama guddaa kafalee jira. Wareegama wareegamaa olii kafalee jira. Qabsoon ummatni keenya tooftaa fi dhaabota adda addaa jalatti gaggeesse kan himamee dhumuu miti.
Haata’u malee qabsoon ummatni keenya gaggeesse dhibdee sababa sirna gita bittaa nafxanyaa kanaatiin kan ka’e gurmaa’uu mannaa haala qoqqoodameen, qindaa’uu manna haala faffaca’aa taheen akka lafarra shorroqu gahee guddaa taphatee jira. Qabsoon ummatni oromoo akka dhunfaattiis tahee dhaabbota adda addaa jalatti akkasumas diiddaa addaa addaa fi mormii adda addaa adeemsisuun, nafxanyaaf oomishuu diduun, nafxanyaa tajaajiluu diduun fi tooftaa adda addaatiin diiddaa gabrummaatiif qabsoon akka ummataatti godhe qabsoo hadhaawaa, qabsoo dheeraa fi qabsoo wareegamni guddaan itti kafalame ture. Qabsoon keenya qabsoo ummataati malee qabsoolee dhaabaa fi qabsoolee akka dhunfaatti ibsamuu miti. Ummatni Oromoo sadarkaa sadarkatti, naannowaa naannowatti, umriidhaa umritti, kaabaa kibbatti, bahaa dhihatti haala adda addaatiinii fi tooftaa adda addaatiin hanga dandeettii isaa diddaa sirna gita bittaa nafxanyaaf qabsoo hadhaawaa gaggeessee jira. Wareegama wareegamaa olii kafalee jira. Gabrummaa diddaa falmatee jira.
ABOn akka dhaaba ummata Oromoo isa jalqabaatti qabsoon inni ka’eef Sirna cunqursaa Gita bittaa nafxanyaa kana ofirraa fonqolchee dabruun bilisummaa Ummata Oromoo fiduuf ture. Kanaaf deeggarsa Oromummaan ummaadhaan maddisiiftu qabaachuu ture. Fedhii ummata Oromoo hundaa waan taheef. Kaaayyooo Ummata Oromoo waan taheef. Qabsoo ummata Oromoo hundaa waan taheef. Hirmaannaan guddaas kennamaaf ture.
Garuu qabsoon ABOn gaggeessaa ture rakkoo adda addaa of keeessatti uumamuu fi qoqoodummaa addaa addaatirraa kan ka’e akka dhaabaatti kaayyoo dhaabaa (kaayyoo Oromummaaf bilisummaa) kanaaf qabsaa’uun farra Ummata Oromoo kan ta’e sirna gita bittaa kanarrratti human guddaanii fi kaaayyoo tokkoon falmuu manna of-keessatti wal nyaachaa fi wal qoqqoodaa, qabsoo ummata Oromoo qabsoo sabaa fi sablammoota cunqurfamoo biraatii wajjji walitti-hidhuu mannaa qabsoo ummata Oromoo qabsoo sabaa fi sablammootni birootiis sirna nafxanyaa kana falmachaa turerraa fageessaa ture. Kanarraa kan ka’ees wareegamni ummatni Oromoo qabsoo sirna nafxanyaa irratti gaggeessu kanaan kafalu akka guddatu, cunqursaan nafxanyaan ummata Oromoorratti gaggeessaa ture sun akka hammaatu, akka qabsoon ummata oromoo lafarra shorroqu godhee jira. Akka bilisummaan ummata keenyaa fagaattu godhee kan turees dhaabuma kana. Dhaabni kun qabsoon ka’uun isaa qofti dinqisiisaa fi seena qabaataa tahuu isaa garuu irraanfatamuu hin qabu.
ABOn akka akkana tahuuf sababiin isaas inni guddaan sababii cunqursaan sirna gita bittaa nafxanyaa kun ummata keenyarratti gaggeesse dhiibbaa inni eenyummaa fi maalummaa keenyarratti fide sanaan waan saaxilamee fi. Ummatni Oromoo aadaa wal qoqqooduus tahee, aadaa sabaa fi sablammoota biro wajji wal itti hin taane hin qabu. Kun kan dhufe sababii sirna cunqursaa nafxanyaa kanaatii jalqabee ti. ABOniis akka dhaabaatti kanaaf saaxilamee ture.
Kanarraa kan ka’e qabsoon ummata Oromoo sabaa fi sablammoota biraafiis tahee ummattoota biraafiis akka hammeenyaan ilaalamu tahee ture. Bilisummaan keenya dhuma cunqurfama ummata keenyaa qofa osoo hin ta’in ilaalcha soda sabootaa fi sablammoota birootiif akka tahu godhaa kan ture ABO ture. Oromummaan badhaadhummaa fi jaalala osoo hin tahin suuraa nafxanyaan ummatoota biraa keessatti uume akka fakkkatu ABO fakkeenya tahuun qabsoon keenya akka dheeratu akka sodaatamu godhee ture.
Kana dabrees ABOn kaayyoo qabsaa’eef dagachuun, eeenyummaa fi maalummaa ummata qabsaa’eef dagatee, fedhinnaa fi hawwii ummata qabsaa’eef dagatee bilisummaa ummata Oromoo keessattiis bilisummaa dhuma hin qabne barbaadaa akkasumaas deebi’ee ummata qabsaa’eef jedhutti dhaaba qabsaa’e. Deebi’ee ummata kiyya jedhee tureef dhaaba diina tahe. Dhaaba ummata qabsaa’ee ture deebi’ee dhaaba morma qale. Dhaaba ummata qabsaa’eefii ture deebi’ee ittiin daldale. Dhaaba farra ummata isaaf deebi’ee ta’e. Dhaaba jiruu awurooppaa fi ameerikaa isaatiif miidhamina ummata isaa hawwe. Yaale.
Ummatni Oromoo sirna cunqursaa waggoottan dhibbaaf ture erga ofirraa dabre waggaa 25 qofa. Waggaalee diigdamii shanan dabre kana keessatti mirga ofiin of bulchuu, mirga aadaa fi afaan isaa itti fayyadamuu, ittiin buluu, dagaageeffachuu argatee jira. Sirna feederaalizimii sabaa fi sablammoota biraa wajjiiniis jaalalaan, fedhinnaan itti jiraatu sirna haarawaas ijaaratee jira. Sirna kana keessattiis naannowa isaa argatee jira. Mirga ofiin oif bulchuu argatee jira. Mirga hiyyummaa sirni nafxanyaa isarratti ukkaamse kana misoomaan ofirraa itti fonqolchuus argatee jira. Mirga dimokraasii fi mirga dhlaootaas argatee jira. Oromoon abbaa qabeenyaa, oromoon barataa, oromoon barsiisaa, oromoon doktoora, oromoon bulchaa, oromoo filataa, oromoon filatamaa, oromoon poolisii, oromoon waraana biyyaa, oromoon misooma, oromoon jaalala tahee jira. Oromoon abbaa seeraa, oromoon abbaa haqaa, oromoon abbaa duulaas tahee jira. Afaan keenya afaan buddeenaa, afaan seeraa, afaan aqaa, afaan saayinsii, afaan guddinaas tahee jira. Aadaa keenyaas yeroo yerotti dagaagaa jira.
Rakkoon hin jiruu? Hir’inni hin jiruu? Rakkooleen keenya hundi guyyyaa tokkotti hin hiikkamu. Guyyaa tokko keessatti ni hiikkama jedhamees hin eeggamuus. Rakkoon keenya kun hundi Galgala tokko keessatti waan hin dhufiniif. Akka namni utaaletti osoo hin ta’in akka utaaluu qabnutti utaalla. Eessaa kaanee eessa akka dhaqnu beekuu qabna. Amma eessa geenyees yaadachuu qabna. Hangam deemuu qabnaas yaaduu qabna.
Kanaa ol garuu rakkoon keenya inni guddaan diina keenya fira fakkaatee kan nu miidhaa jiru ABO dha. ABO fi ilaalcha siyaasaa kuftee siyaasaa garaa ofiii kan ta’e siyaasaa ofiin osoo hin ta’in namaan qabsaa’uu ti. Farri keenya kan ijoollee Oromoo barumsa dhoorku. Farri keeenya ka kan qabnu nu jalaa barbadeessu. Farri keenya kan sabaa fi sablammoota biroo wajjiin wal nu kaa’uuf yaalu.
Farri keenya kan rakkoo keenya dhoksee nama biraatti dhiibu. Rakkoon keenya rakooo keenya. Akka namni hiikutti osoo hin ta’in akka keenyatti hiikna. Keessa keenya akka hin ilaalle kan nuuf himu diina keenya. Farra keenya. Ka sirrii ta’e ciminaan itti fufuuf, kan dhibdee tahe akka sirreessinu akka ummatattti of keessa ilaaluunii fi of keessa qorachuun qaroomina. Guddina.
Oromoon kan hir’ate guuttatti malee, kan qabdu hin barbadeessitu. Diinni fira fakkaatu diina diinaa olii ti.
Bakar Waaree [email protected] fayyadamuun qunnamuun ni danda’ama.
April 19, 2017 at Wed, 19 Apr 2017 16:11:23 +0300
Sanyiin gad adeemtuu harree hiribbii fuuti” jedha Oromoon, waanta jennuu beeknee fi of eegnee saba keenyaaf dursa laachaa seenaa saba keenyaas gad fageenyaan ilaaluudhaan barreessuun of barreessu fi of beeksisuu ta’a, lama buluudhaaf jecha jecha lama dhabaa tokko gammachiisuudhaaf barreessuun garuu of balleessuudhaaf barreesuudhaa kabajamoo Bakar Waaree! Akka koo akka koottii yeroo amma kana waa’ee Dhiibba nafxaanyaa kaleessaa barreessuun kee fi keessuumaa keessumaa waa’ee dhiphummaa fi oftuulummaa Oromoo kan ABO fakkeessite haasa’uun kee dhugaa fi miidhama Oromoo har’aa dhoksuuf natti fakkaata. gochakee kanaaf immoo seenaan Oromoo si gaafata! Dhugaan Oromoo si gaafata! Waaqni Oromoos si gaafata! Amma yeroo haati oromoo ijoollee mirga ofiif karaarraatti wareegamaa jirtuuf dhiiga bohaa yeroo jirtutti dogoggora dhaaba Oromoo keessaa bahee afaan ittin barreessituu fi biyya ittin odeessitu kana harka keetti kennee arrabsituuf cabsitudharee? Cimina hin qabu ABO’n? OPDO’n hoo? Gaaffin oromoo har’aa gaafii mirga abba biyyuummatii moo ergama ABO ti ree? Maqaan garaarra guuddaa akka caaluu yaadi! Oromoon amma nuti beeknuu ol beekaa ture beekadhas, ololaa fi oduu dhabaa tokkoon akka dhahaa galaana irraa asii fi achi hin dhahamu, kan dhahamu yoo jiraate tarii anaa fi si warra ilaalchi diina oromoo, oromiyaa sba ishee waliin balleessuudhaafi qabeenya ishee guutumman guututti saamuudhaaf faayidaadhan nu macheessaan anaa fi si ta’a, male warri wareegama jiran dhugaafidha, diinumma warra ajjeesanii immoo kan beektu, gaafa uummata harka qulla ajjeesa qabeenya barbadeesan jedhanidha…ati barreessaa miti dhaqii ilaalii dhugaa fi soba isaa?, dubartii ulfaa fi ijoollee, jaarsoolii raagoo gaafa ajjeesanidha. Yoosoo ati amma eessa dhaabattee eenyun komachaa jirta? Iddoo dhabaachaa jirtu miilakee jala dhiigni obbolaakee sitti hin mul’atuu? Oromoon farra miti, eebba itoophiyaati malee, almeeqa itoophiya baddees ijaareera, hareesseera, werara irraas oolcheera, dhugaan isaa immo har’as dhokataadha, qabsoon isaas kanaafi!! Orma taatee yoo kaate of dhabdee hafta, dhuma irras ni barbadoofta! Oftaatee yoo kaate garuu duukaa bu’aa horta abbaa seenaa taata!!!!!!
April 19, 2017 at Wed, 19 Apr 2017 16:09:33 +0300
yaanii asii ollitti kename ga’adha
April 4, 2016 at Mon, 04 Apr 2016 18:04:42 +0300
YAA LAMMII TOO TOKKO HAA TAANU!
March 3, 2016 at Thu, 03 Mar 2016 09:39:53 +0300
“Sanyiin gad adeemtuu harree hiribbii fuuti” jedha Oromoon, waanta jennuu beeknee fi of eegnee saba keenyaaf dursa laachaa seenaa saba keenyaas gad fageenyaan ilaaluudhaan barreessuun of barreessu fi of beeksisuu ta’a, lama buluudhaaf jecha jecha lama dhabaa tokko gammachiisuudhaaf barreessuun garuu of balleessuudhaaf barreesuudhaa kabajamoo Bakar Waaree! Akka koo akka koottii yeroo amma kana waa’ee Dhiibba nafxaanyaa kaleessaa barreessuun kee fi keessuumaa keessumaa waa’ee dhiphummaa fi oftuulummaa Oromoo kan ABO fakkeessite haasa’uun kee dhugaa fi miidhama Oromoo har’aa dhoksuuf natti fakkaata. gochakee kanaaf immoo seenaan Oromoo si gaafata! Dhugaan Oromoo si gaafata! Waaqni Oromoos si gaafata! Amma yeroo haati oromoo ijoollee mirga ofiif karaarraatti wareegamaa jirtuuf dhiiga bohaa yeroo jirtutti dogoggora dhaaba Oromoo keessaa bahee afaan ittin barreessituu fi biyya ittin odeessitu kana harka keetti kennee arrabsituuf cabsitudharee? Cimina hin qabu ABO’n? OPDO’n hoo? Gaaffin oromoo har’aa gaafii mirga abba biyyuummatii moo ergama ABO ti ree? Maqaan garaarra guuddaa akka caaluu yaadi! Oromoon amma nuti beeknuu ol beekaa ture beekadhas, ololaa fi oduu dhabaa tokkoon akka dhahaa galaana irraa asii fi achi hin dhahamu, kan dhahamu yoo jiraate tarii anaa fi si warra ilaalchi diina oromoo, oromiyaa sba ishee waliin balleessuudhaafi qabeenya ishee guutumman guututti saamuudhaaf faayidaadhan nu macheessaan anaa fi si ta’a, male warri wareegama jiran dhugaafidha, diinumma warra ajjeesanii immoo kan beektu, gaafa uummata harka qulla ajjeesa qabeenya barbadeesan jedhanidha…ati barreessaa miti dhaqii ilaalii dhugaa fi soba isaa?, dubartii ulfaa fi ijoollee, jaarsoolii raagoo gaafa ajjeesanidha. Yoosoo ati amma eessa dhaabattee eenyun komachaa jirta? Iddoo dhabaachaa jirtu miilakee jala dhiigni obbolaakee sitti hin mul’atuu? Oromoon farra miti, eebba itoophiyaati malee, almeeqa itoophiya baddees ijaareera, hareesseera, werara irraas oolcheera, dhugaan isaa immo har’as dhokataadha, qabsoon isaas kanaafi!! Orma taatee yoo kaate of dhabdee hafta, dhuma irras ni barbadoofta! Oftaatee yoo kaate garuu duukaa bu’aa horta abbaa seenaa taata!!!!!!
February 13, 2016 at Sat, 13 Feb 2016 20:19:50 +0300
Gargaruma Ethio fi oromiya maali? DH.D.U.O oromoof maal buuse? M.N.Oromiya irree ofiin of bulchu hinqabu? Yoo qabate ta’e humna warrana mataa isatin ummata isa to’achu dadhabe,otoo afuuri ABO jiraachu baate har’a DH.D.U.O hinjiru ture,
February 9, 2016 at Tue, 09 Feb 2016 18:45:24 +0300
Rakko keenya sirriti ilaalun qoricha hunda caalu waan ta’eef of ilaallee fuladurrati haatrkafanu. Nutii abba biyyaati, Oromiyaan handhura Etoophiyatii. kaana biyii Oromiyaa malee biyya wan hintaneef siyassa biyyaa haataphanu. Tokko tanee biyya bulchuf haaqophanu.